Nhau dzekambani - Nhau - Shenzhen Wudongfang Tsika Kutaurirana Co, Ltd. - Page 1
Imba > Nhau > Nhau dzekambani
Kudzidza ballet kwenguva yakareba kunogona kutsigira vanhu vane hunhu hwakanaka, chinovawo chikonzero chakakosha chekuti vanhu vazhinji nevazhinji vapinde ballet. Asi mabhenefiti ekudzidza ballet anokunda zvakanyanya shanduko muhunhu, saka kudzidzira ballet kunounza chii kumuviri?
Pazera ripi mwana paanotanga kudzidza ballet zvirinani?
vana vanogona kudzidza ballet kubva pamakore mana kusvika gumi nemashanu, mushure mezera regumi pachigunwe, asi nenzira dzakakodzera dzekudzidzisa, mwana pazera rezvigunwe anogona kusimukira.
Chii chinonzi tutu ballet dress?
Nhasi chikoro chinokupa sumo pfupi kune tutu siketi ye ballet.
Musikana wese ane fungidziro yakanaka nezve siketi. Tutu siketi ye ballet jira rinogona kugutsa fungidziro dzese dzakanaka dzevasikana. Fluffy uye akareruka, musikana wese akapfeka yakanaka tutu siketi achazvifungidzira iye kunge ingano mune yengano iri mumoyo make. Kune vamwe vanhu vashoma vane hop......
Nhanganyaya kune ballet TUTU kuchengetedza uye kutakurika
Ichi chinyorwa chiri kunyanya nezve chekuchengetedza uye kutakurika kwetutu. Nzira yakanakisa yekutakura madhirezi etutu ndeyekuaisa muhomwe yakasarudzika. Zvikasadaro, zviri nyore kukuvadza ballet tutu kana iwe ukaitakura zvisina basa. Kana zvisingaiti kutakura tutu zvakanyatsonaka, unogona kusunga......